Ngemuva kokusolwa kukaKanye West ngokungathembeki, uMeek Mill uhlukane nentombi yakhe - izingcingo ezilandelwayo
Ngemuva kokusolwa kukaKanye West ngokungathembeki, uMeek Mill uhlukana nentombi yakhe
By brylandobe On UJul 28, 2020
UMeek Mill umemezele ezinkundleni zakhe zokuxhumana ukuthi akasekho ebudlelwaneni nomlingani wakhe, imodeli uMilan Harris. Lezi zindaba bezingeke ziphakamise amashiya uma, ngesonto eledlule, lo rapper ebengasolwa ngogxa wakhe u-Kanye West ngokuthi ubenobudlelwano bokuphinga nonkosikazi wakhe owedlule, uKim Kardashian.
Esithombeni sakhe, uMeek Mill akakusho konke lokhu "icala", kodwa uyachaza ukuthi yena nentombi yakhe babevele benqume ukuthi kungcono baqhubeke babe abangani bakhulise ingane yabo ngokwahlukana.
"Sisathandana kakhulu kodwa safika esivumelwaneni", uthumele umlayezo selokhu wasuswa kodwa udluliselwe kabusha yi-The Blast.
Okuphakela wonke amahlebezi, ikakhulukazi njengoKim Kardashian, wakhetha ukuhlale enokuqonda ngangokunokwenzeka endabeni ...
Le ndatshana iqale ukuvela ku: https://onvoitout.com /
Ngemuva kokusolwa kukaKanye West ngokungathembekiUMeek Mill uhlukana nomlingani wakhe
Indlovukazi yakusasa yaseNgilandi ayenzanga mzamo, ngokusho kwencwadi entsha eyethusayo
U-Kanye West ungeniswe esibhedlela, kubukeka sengathi usephinde wathola, ngokwengxenye, kwemizwa yakhe